Windows 8 အကြောင်းတစ်စေ့ တစ်စောင်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Windows 8 အကြောင်းတစ်စေ့ တစ်စောင်း
Windows 8 အကြောင်းတစ်စေ့ တစ်စောင်း
By နေမင်းမောင်7:50 PM21 comments
ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့က Windows 8 အတွက် Windows Developer Preview ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့ ကောင်လေးကို စမ်းပြီး သုံးကြည့်ရင်းနဲ့ တစ်ခြားမသုံး ရသေးတဲ့သူတွေလဲ Windows 8 နဲ့ပါတ်သတ် တာလေးတွေ ဘာတွေ Support လုပ်ထားတယ် ၊ ဘယ်လို Function တွေပါဝင်တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်လေ့လာ မိသလောက်လေး ပြန်ပြီးမျှဝေ ပေးသွားပါမယ်.. ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်တဲ့ အခါကြရင် အဆင်ပြေပြေ နဲ့ ဘယ်ဟာက ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာကိုလဲ သိစေချင်တဲ့ သဘောနဲ့ပါ.. ကျွန်တော်တို့ Windows 8 ကနေပြီးတော့ September 13 ရက်နေ့မှာ Preview Version ဆိုပြီး Windows Developer Preview ကို အစမ်းအနေနဲ့ စပြီးအသုံးခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်.. အများစုလဲစမ်းသုံးဖူးကြရင် သုံးဖူးပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
Windows Developer Preview ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ Hardware Requirement ကိုကျွန်တော် အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်.. တကယ်လို့စမ်း သုံးမယ်ဆိုရင်တောင် မိမိတို့စက်မှာ တင်ထားတဲ့ Windows အဟောင်းရယ် Windows Developer Preview ကိုတင်တဲ့အခါ အဆင်ပြေမပြေကို အရင်ဆုံးလေ့လာ သင့်ပါတယ်..
1 GHz x86 processor 1 GHz x86-64 processor
(Not absolutely necessary; only required for Aero hardware acceleration. Graphics processors with no WDDM support will fall back to software rendering of Windows Aero and other 3D-accelerated graphics.)
အပေါ်ကတော့ Windows Developer Preview ကိုစမ်းပြီး သုံးကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် လိုအပ်မဲ့ Hardware Requirement ပါ..
Windows ကိုစပြီး Install လုပ်တဲ့ အပိုင်းကနေပဲ ပြောပြပေးပါမယ်.. ဒီကောင်လေးကို Install လုပ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ Windows7Installation လုပ်တာနဲ့ အရမ်းကြီးတော့ ကွာခြားမှုမရှိပါဘူး Windows7ပေါ်မှာပဲ အဓိကအခြေခံပြီး ထုတ်ထားတာလို့ ပြောလို့လဲရပါတယ်.. Windows XP နဲ့ Windows7Installation လုပ်သလို အရမ်းကြီး ကွာဟမသွားပါဘူး.. ဒါကြောင့် Windows7တင်တက်မယ်ဆိုရင် Windows 8 Installation ကိုလဲလုပ်ဖို့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Windows 8 မှာ Windows7နဲ့လုံးဝ ကွာခြားသွားတာကတော့ Start Menu Screen ပါ .. ကျွန်တော်တို့က Windows Installation ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ အရင် Windows7မှာလို Windows7Screen ကိုတန်းပြီး ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပဲ Start Menu Screen ကိုတန်းပြီး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့က Windows Screen ထဲကိုဝင်မယ်ဆို တော့မှ Windows Screen ကိုရွေးပြီးဝင်ရောက် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ကျွန်တော် လဲအများကြီးတော့ စမ်းမကြည့်ရသေးပါဘူး..ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် စမ်းသုံးကြည့် သလောက် Windows 8 Priview Version မှာ Windows7ထက်ပိုပြီး ထူးခြားလာတဲ့ အချက်လေးတွေကိုတော့ ရေးပေးသွားပါမယ်..
ကျွန်တော်တို့ Windows 8 Screen ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီ ဆိုရင် အရင်ဆုံး လေ့လာရမှာက Start Menu Bar ပါ .. Windows 8 မှာအရင်လို Start Menu Bar မပါတော့ပဲ Start Menu Bar အစား Search ကိုကောင်းကောင်း အသုံးချလို့ ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်..
အပေါ်က ပုံအတိုင်း Start Menu Bar ကိုအရင်လို ထည့်မပေးတော့ပဲ Start ဆိုတာလေးကို ထောက်လိုက်ရင် Start Menu Bar လေးပေါ်လာမယ်.. အဲ့ဒီကမှ မိမိ Windows မှာတင်ထားတဲ့ Application တွေကိုရှာမယ် ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Setting မှာသွားပြီးရှာမယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Search ကနေသွားပြီး ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
အပေါ်ကပုံ အတိုင်းပေါ်လာရင် ကျွန်တော်တို့က အရင်ဆုံး Application ထဲမှာရှာချင်တာလား , Setting ထဲမှာရှာချင်တာလား ဆိုတာကိုအရင်ရွေးပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင် Search မှာ ဥပမာ ၊ ၊ Mozilla Firefox ကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင် Mozilla Firefox ကိုရှာ ပြီးရင် ဆက်လုပ်လို့ရမယ့် Function တွေကို အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်..
အောက်ကပုံအတိုင်း ကိုရွေးထားတဲ့ Application ကိုချက်ချင်း မဖွင့်ပဲ Tab Bar ထဲမှာထည့်မှာလား တစ်ခြားသုံးလို့ ရတဲ့ Function လေးတွေလဲရှိပါသေးတယ်.. အရင်ဆုံး Firefox ကိုရွေးထားတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကောင်လေးကို Right Click ထောက်လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် အမှန်ခြစ်လေး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..
ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို Run မှာလား စတာတွေကိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်.. ကျွန်တော်ကနမူနာ သဘောပြောပြပေးတာပါ.. သုံးကြည့်လိုက်ရင် သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်..
အောက်ကပုံကတော့ ကျွန်တော်တို့ Start Menu Bar ကနေ Setting ကိုဝင်လိုက်ရင် တွေ့ရမဲ့ ပုံစံပါ.. Setting အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ Sound ပိုင်းတွေ Network ပိုင်းတွေ အတွက်ဆောင်ရွက် လို့ရမှာဖြစ်တဲ့ အပြင် ကွန်ပျူတာကို Shurt Down ချမယ် , Restart ချမယ် ဆိုရင် ဒီအထဲက Power ကနေသွားပြီး လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒါလေးပြီးတော့ Folder Option အပိုင်းလေ နည်းနည်းလှည့်ကြည့်ရအောင် .. ဒီနေရာမှာတစ်ခု သတိထားမိလားတော့မသိဘူး Srart Menu Bar မပါတော့ အရင်လို Control Panel ကိုဘယ်လို သွားမလဲ ဆိုပြီးမေးစရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒီအတွက် Windows 8 မှာတော့ Folder Option မှာ ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်.. အောက်မှာ ကျွန်တော် ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်..
အပေါ်ကပုံမှာ ပြထားသလို အရင်လို အလုပ်ရှုပ်နေစရာ မလိုတော့ပဲ Control Panel ကိုသွားမယ်ဆို ရင်လဲ Open Control Panel ကိုရွေးပြီးသွားလိုက်ယုံပါပဲ ဒါမှမဟုတ် Uninstall လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ Uninstall or Changeaprogram ကနေ တိုက်ရိုက်သွားလို့ရပါတယ်..
အပေါ်က ပုံနဲ့ အောက်ကပုံက ဘာကိုပြထားတာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က Folder တွေကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို တစ်နေရာကနေတစ်နေရာ ကိုအလွယ်တကူ ရွေ့နိုင်မယ် . ဒါမှမဟုတ် မိမိတို့ Copy ကူချင်တဲ့ နေရာကို တိုရိုက် Copy ကူးလို့ရမယ် ဖျက်ချင်တဲ့ဖိုဒါကို ရွေးပြီး Delete တိုက်ရိုက် လုပ်လို့ရမယ် .. Rename ပေးချင်ရင်လဲ တိုက်ရိုက်ပေးလို့ ရမယ်.. ဒါက ပိုပြီးအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေ အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ Function တွေပါ..
ကျွန်တော်တို့ Folder Option ထဲက View ကတော့အရင်ထက် အသုံးပြုရတာ ပိုအဆင်ပြေသွား တာပေါ့..
ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ Drive ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ .. အရင်လို Partaio တွေကို Clean Up လုပ်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Format လုပ်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူဆောင်ရွက် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
ပြီးရင်နောက်တစ် ချက်ကတော့ Unicode Font ကို Windows 8 မှာ Support လုပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါကတော့ Windows 8 ထွက်လာတာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး မြန်မာလူမျိုး တွေအတွက် အဓိကအားသာချက် ဖြစ်ပါတယ်. အရင်လို ဖောင့်သက်သက် Install လုပ်စရာမလိုပဲ Unicode နဲ့ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. အရင်လို မြန်မာဖောင့်နေရာဆိုရင် အတုံးတုံးလေးတွေ အပေးတော့ ပဲဖောင့်ပေါ် သွားပြီပေါ့ဗျာ.. တကယ် ကြိုးစားပေးကြတဲ့ ပညာရှင်တွေကိုလဲ အရမ်း ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းပါတယ်.အောက်မှာ ကြည့်ကြည့်ပါ Myanmar Text Regular ဆိုပြီးတွေ့ ပါလိမ့်မယ်..
အောက်ကပုံကတော့ သူထဲမှာ မူရင်းပါတဲ့ Theme ပုံပါ..
အောက်ကပုံကတော့ ကျွန်တ်ာတို့ Welcome Screen ပုံလေးပါ.. ကျွန်တော်တို့က Enter ခေါက်ပြီး ၀င်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ပုံစံပြောင်းလို့ရပါတယ်..
အောက်ကပုံကတော့ ကျွန်တော်တို့ ၀င်သွားလိုက်ရင် Windows Install လုပ်တုန်းက အကောင့်ဖောက်ခဲ့သလိုပဲ User ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီကနေ၀င် ပြီးရင် Password ရိုက်ထည့်ပြီးဝင်သွား လိုက်ယုံပါပဲ..
ဒီလောက် ဆိုရင်တော့ Windows 8 နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး တီးမိခေါက်မိတော့ ရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်လဲ လောလောဆယ် စမ်းကြည့်မိတာ လေးတွေပဲရေးပေး ထားတာပါ.. Windows7အသုံးပြုနေသူ တွေအတွက်တော့ သုံးရတာ အရမ်းကြီးခက်ခဲမှု ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး..
CG YNKH October 26, 2011 at 10:28 AM
အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်လဲ windows 8 အကြောင်းများရှိရင်ရှင်ပြပေးပါဦး
channyeinsoe46@gmail.com November 16, 2011 at 8:18 PM
နေမင်းမောင် November 17, 2011 at 2:56 AM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အကိုဖြစ်နေတာလေးကို မေးလ်ပို့ပေးပါလားခင်ဗျာ ..
yeyint November 20, 2011 at 9:47 PM
ကြေးဇူးပါ ကိုနမေငျးမောငျ ခငျဗြာ...ဒီပို့ဈ လေးကို ကူးသှားပါတယျ..အခကျအခဲရှိတဲ့အခါ အကူအညီတောငျးမယျနျော...
zayar November 23, 2011 at 12:09 PM
အကို တင်ထားတာ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ အကို အနော်ကလဲ အခု မှ လေလာမလိုရှိပါတယ် အကိုကိုယ် စော်ကားသလိုဖြစ်သွားမယ်ဆို တောင်းပန်ပါတယ် အကို အနေနဲ နောက်ထပ် ပြည်ပြည်စုံစုံလေး ထပ်တင်ပေးဖိုမျှော်လင့်ပါတယ် လုံခြုံရေးနဲ ပက်သက်တာ နောက်ပြိးတော့ အသုံးပြုနည်းတွေ အများကြိးကွဲလွဲတာ ရှိသေးတယ် ဗျ ဒိကနေပြောရင်တော့ မပြိးတော့ပါဘူး ဗျာ( ကော်ပိ ) ကူးတာ လည်းတော်တော်လေးကွဲလွဲတယ်ဗျ
မယုံစမ်းကြည်နော် အကို အဲဒိမှာ အကို တစ်ခုကို ကူးပြိး ရပ်ထား နောက်ထပ်တစ်ခု ထပ်ကူး ရတယ် ပြောရင် တော့ မကုန်နိုင်ဘူး ဗျာ ဘာပဲ ပြောပြော အကို ကိုယ် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် လေးလည်း လေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ ..........
နေမင်းမောင် November 24, 2011 at 12:32 AM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. အခုလိုမျိုး ဝေဖန်ပေးတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ အကိုရာ ကျွန်တော်ဒီပို့စ်လေးကို ရေးပေးတယ် ဆိုတာကလည်း အမြည်းသဘောအနေနဲ့ Windows 8 နဲ့ပါတ်သတ်တာလေးတွေကို မသုံးရသေးတဲ့ သူတွေ သိအောင်လောက်ပဲ လေ့လာပြီး ရေးပေးဖြစ်တာပါ .. တကယ့်တကယ်ကျတော့ Windows တစ်ခု ဆိုတာ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး သုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဒီဝင်းဒိုးရဲ့ အပေါ်ယံ အသုံးပြုနည်းကိုတော့ အားလုံးသဘော ပေါက်သွားတာပါပဲ .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပို့စ်တစ်ခု ရေးတယ်ဆိုတာ အချိန်ပေးရပါတယ်အကို ..နောက်တစ်ချက်က အသုံးဝင်တာ မ၀င်တာ တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ် .. Popular ဖြစ်တာလေး တစ်ခုလောက်နဲ့တော့ အဲ့ဒီလိုမျိုးပို့စ်ကို ကျွန်တော် မရေးပေးချင်သေးပါဘူးအကို .. နောက်ပိုင်း Windows 8 ဆိုတာကို တကယ်ပဲ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ Windows တစ်ခုကို Backup လုပ်ထားသင့်တဲ့အပိုင်းတွေ တောင်ယုံတန်ယုံ Error လောက်တွေကို Restore ပြန်လုပ်ယုံနဲ့ Windows ပြန်တင်စရာမလို အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမယ် ဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေကို ကျွန်တော် အဓိကထားပြီးပဲ ရေးပေးချင်တာပါ .. ရေးလည်းရေးသွားမှာပါ .. အခုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ ခေါင်းစဉ်ကိုက Windows 8 အားလေ့လာခြင်းလို့ မပေးပဲ Windows 8 အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်းလို့ ပေးခဲ့တာလည်း Windows 8 နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပေါ်ခါစအနေအထားမှာ ဘာတွေသုံးလို့ရတယ် .. ဘယ်လိုပုံစံတွေပါတယ် ဆိုတာကို မိတ်ဆက်အနေနဲ့ပဲ ရေးပေးထားတာပါ .. ဒါကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် ... နေမင်းမောင်
မလောက်လေးမလောက်စား November 29, 2011 at 5:40 PM
ရောင်နီလင်း December 4, 2011 at 5:29 AM
Windows 8 အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်းတဲ့..
အသေးလေး January 9, 2012 at 8:39 AM
ဒါပေမယ့် အစ်ကိုတင်ပေးထားတဲ့ post တွေကို pdf file ပါတင်ပေးရင်အရမ်းကောင်းမယ်နော်။
နေမင်းမောင် January 9, 2012 at 8:06 PM
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ .. အလိုအကြံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို ..
နေမင်းမောင် January 19, 2012 at 3:52 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. ကျွန်တော် ဒီအောက်ကလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်အကို .။.
ko ko January 20, 2012 at 7:31 PM
အကို့ကိုတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်...ဝင်းဒိုး 8 ကိုကျွန်တော်ခုလက်ရှိစမ်းသုံးနေပါတယ်..ကျွန်တေည်မသိ
တာက Theme ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာစာရိုက်လို့မရတော့ပါဘူး..7 မှာတော့ window color နေရာမှာ
သွားချိန်ရင်ရပါတယ် 8 မှာကြတျော့မပါတော့ပါဘူး..ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲဗျာ..ပြောပြပေးပါနော်...Theme တစ်ခါပြောင်းရင်ဇော်ဂျီကိုတစ်ခါပြစ်ပြီးတစ်ခါပြန်အင်စတောလုပ်နေရတယ်...ပြောပြပေးပါနော်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ko ko January 20, 2012 at 7:48 PM
ko ko January 20, 2012 at 7:49 PM
iever March 24, 2012 at 2:34 PM
next day see you
KoKaung April 23, 2012 at 4:14 PM
ဒါပေမဲ့ Windows 8 Developer Preview က VMWare အတွက်သုံးဖို့ပဲလားဗျာ တကယ်အနေနဲ့ရော မိမိPC မှာရောသူ့ရဲ့ functions အပြည့်သုံးနိုင်ပါ့မလား
နေမင်းမောင် April 23, 2012 at 7:38 PM
မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ တင်ပြီး သုံးရင်လည်း ရပါတယ် .. ကျွန်တော်က သူ့ရဲ့ ပုံစံလေးကို သိချင်သူတွေ အတွက် သက်သက် တင်စရာမလိုပဲ ဒီနည်းလမ်းလေးကို သုံးပြီး အလွယ်တကူ သိနိုင်လို့ ရေးပေးထားတာပါ ..
Aiseesoft Blu-ray Converter Ultimate 6.2
Excel Password Unlocker 4.0.2.3 + Patch
Word,Access & Zip Password Unlocker
Mac OS X Theme for Window XP
Mediachance Dynamic Auto-Painter 2.5.1_Portable
WindowsGenuineMaker 100 working
Windows Doctor 2.7.1 + Patch
Math Type 6.6 + Keygen
Iobit Game Booster 3.0 + Serial
Multiupload နှင့် Free Uploading ဆိုဒ်များအကြောင်း...
Wishfull Dream Final - Theme For Windows 7
Beautiful Thai Font
Lightweight summer theme
AVIRA PREMIUM KEYS 26 SEPTEMBER 2011
Relaxing_Nature Screen Saver
Greeting_Card_Studio_5.21 + Serial
Desktop Gadgets Error ကိုဖြေရှင်းရန်
Focus Photoeditor 6.3.7 + Keygen
Glass CMD For Vista and Seven
Ichigo Pistachio Theme for Windows 7
Windows 8 First Demo Video
1000 Photoshop Tips and Trick ( E-Book )
How to really fix Explorer.exe
A1llustrator CS5 v15.0.0.Portable
Hardware Installation ( မြန်မာပြန် ရှင်းလင်းချက် )...
Adoble Photoshop 7.0 နှင့် အသုံးပြုနည်း ( E-Book )...
PageMaker7+ Serial
HJ Split ဖြင့်ဖိုင်ခွဲခြင်း ၊ ဖိုင်ဖြည်ခြင်း
Nero Burning Rom 10 Full Portable Lite Version
Aero x Final For Windows 7
VMware ပေါ်မှာ Windows အတုဖန်တီးပြီးသုံးရအောင်
Introduction to Computer Science ( E-Book )
Neon vs Final Theme For Windows 7
Fotomatic 1.4 Plugins for Photoshop
Windows 8 Skin Pack 6.0 for Windows7(x86/x64)
Athentech Perfectly Clear 1.5.8 for Adobe Photosho...
Picture Cutout Guide Lite 2.4.2 ML + Portable
Smarter7 Beta For Window 7
ချစ်စရာ Screen Saver လေး
Gretting Card လေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ပုံဖော်ကြရအောင်
RonyaSoft Poster Designer 2.01.28 + Keygen
Learning Excel 2007 ( E-Book )
Sams Teach Yourself Microsoft(R) Office 2007 All i...
C ++ စာအုပ်များ ( အပိုင်း ၁ , ၂ , ၃ )
Windows7Loader with Activator v2.0.6 - x86/x64
ဖိုလ်ဒါ နဲ့ ဖိုင်လေးတွေကို လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းကြရေ...
JAVA Developer Guide ( E-Book )
WinUtilities Professional Edition 10.34 Portable
Internet Download Manager 6.07 Build 11 + Patc...
DigiFish Aqua Real 2.104a Screensaver
Mac Os Manual ( E-Book )
CorelDRAW Art Design ( E-Book )
Blog မှာ Page Navigation ထည့်ချင်သူများအတွက်
32 Bits နှင့် 64 Bits ဘယ်လိုခွဲမလဲ
Avira Premium Security Suite 10 Free License (...
Ubuntu 10 Install လုပ်နည်း ( မြန်မာ E-Book )
Google Book များအားအလွယ်တကူဒေါင်းလော့လုပ် ...
Valentine’s Day Fonts စုစည်းမှုများ